Ciidamada Puntland oo howlgal culus sameeyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidamada Puntland oo howlgal culus sameeyay
Ciidamada Puntland oo howlgal culus sameeyay
Ciidamo ka tirsan kuwa Ammaanka Puntland ayaa waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen degaano ka tirsan Gobolka ay Puntland u taqaano Gardafuu, howlgalkaas oo ah mid amniga lagu xaqiijinaya.
Howlgalka ayaa waxaa siwadajir ah u fulinaya Ciidamada difaaca Puntland ee PMBF, Ciidamada Madaxtooyada iyo kuwa Booliska, waxana laga fuliyay degaanka Xaabo iyo Inta u dhaxaysa Geesalley oo ka tirsan gobolka Gardafuul.
Saraakiisha howlgalka hoggamineysa ayaa waxaa ay sheegeen in u jeedkooda uu yahay sidii looga hortegi lahaa falal amni darro oo mararka qaar wadada u dahxeysa Xaabo & Geesalley ay ka geystaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha ma sheegin waxyaabo laagu soo qabtay howlgalka, hayeeshee ay sheegen in sidoo kale ay sameynayeen barista miinooyin ay Al-Shabaab iyo Daacish ku aaseen wadadaas.
Degaano ka tirsan Puntland gaar ahan gobolka Bari ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo miino iyo weeraro ay mas’uuliyadooda sheegtaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab & Daacish.
Previous articleFaah faahin qaraxa ka dhacay Muqdisho & Booliska oo ka hadlay
Next articleMareykanka oo liiska Argagaxisada ku daray saraakiil ka tirsan Al-Shabaab